မြ၀တီ - နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျောက်ဆည်မြို့နယ် ဘဲလင်း ၁၄၅ မဂ္ဂါဝပ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား တက်ရောက်
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျောက်ဆည်မြို့နယ် ဘဲလင်း ၁၄၅ မဂ္ဂါဝပ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား တက်ရောက်
Saturday, 18 May 2019 07:51 font size decrease font size increase font size
နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ဆည်မြို့နယ် ဘဲလင်း ၂၃ဝ ကေဗွီ ဓာတ်အားခွဲရုံဝင်းအတွင်း၌ တည်ဆောက်ပြီးသွားသည့် ၁၄၅ မဂ္ဂါဝပ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံးဓာတ်အားပေး စက်ရုံဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်အမှာ စကားပြောကြားသည်။
အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေ၊ ဦးမင်းသူနှင့် ဦးဝင်းခိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင်၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဘဲလင်းသဘာဝ ဓာတ်ငွေ့သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည့် Powergen Kyaukse Co.,Ltd. မှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ပညာရှင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ဖိတ် ကြားထားသူများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ တက်ရောက်ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမှာစကားပြောကြားသည်။ ထို့နောက် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်က ဓာတ်အားပေး စက်ရုံဆောင်ရွက်ခဲ့မှု၊ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင်က မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိမှု အခြေအနေနှင့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်းမှ ရရှိသော အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားကြသည်။
ယင်းနောက် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ခဲ့မှု ဗီဒီယိုရုပ်သံမှတ်တမ်းကို ပြသပြီး ဓာတ်အားပေး စက်ရုံတည်ဆောက်ပေးမှုအတွက် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းလှိုင်က ကျေးဇူး တင်စကားပြော ကြားသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်က စက်ရုံအတွက် အင်ဂျင်များသယ်ယူရန် ပံ့ပိုးကူညီ ပေးခဲ့သည့် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန လမ်းဦးစီးဌာန အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးသိန်းအောင်အား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကို လည်းကောင်း၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည့် Powergen Kyaukse Co.,Ltd.မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်ကျေးနှင့် တာဝန်ရှိသူများအား ဂုဏ်ပြုသစ်သီးခြင်းကို လည်းကောင်းပေးအပ်သည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ Powergen Kyaukse Co.,Ltd. ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။ ထို့နောက် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော်ဦး၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ထွန်းနိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီး ဦးဇာနည်အောင်၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ ကြည်မို့မို့လွင်၊ အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အုန်းကြည်၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်နိုင်လင်းနှင့် Powergen Kyaukse Co.,Ltd. ဒါရိုက်တာ ဦးအောင် လှိုင်ဦးတို့က ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကို ဖဲကြိုးဖြတ်၍ ဖွင့်လှစ်ပေးကြသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင်တို့က စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၁၄၅ ဒသမ ၄၉ မဂ္ဂါဝပ်ကို မဟာဓာတ်အားလိုင်းပေါ်သို့ ပို့လွှတ်နိုင်ရန် စက်ခလုတ်နှိပ်၍ ဖွင့်လှစ်ပေးသည်။
ယခုဖွင့်လှစ်သည့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသည် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကဏ္ဍ BOO စနစ်ဖြင့် ငါးနှစ်တာ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင်သုံး ဓာတ်အားပေး စက်ရုံဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းထွက် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည့် ရွှေကမ်းလွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုဗပေ သန်း ၃ဝ ကိုအသုံးပြုကာ ဓာတ်အား ၁၄၅ မဂ္ဂါဝပ်ကို ရေတိုငါးနှစ်တာ ကာလအတွက် ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းပြီးစီးအောင် တည်ဆောက်ရေး ကာလ ၁၁ လခန့်သာ အချိန်ယူ တည်ဆောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သည့် ၁၄၅ မဂ္ဂါဝပ်ဓာတ်အားကို ဘဲလင်း ၂၃ဝ ကေဗွီဓာတ်အားခွဲရုံနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ၁၃၂ ကေဗွီ အောင်ပင်လယ်-တံခွန်တိုင် ဓာတ်အား လိုင်းဖြင့် မန္တလေးမြို့သို့ ၉ဝ မဂ္ဂါဝပ်ပမာဏကို လည်းကောင်း၊ ကျန်ရှိသည့် ၅၅ မဂ္ဂါဝပ်ကို ၃၃ ကေဗွီဓာတ်အားလိုင်းဖြင့် စဉ့်ကိုင်နှင့် ကျောက်ဆည်မြို့တို့သို့ လည်းကောင်း ပို့လွှတ်ပေးလျှက်ရှိပြီး ၎င်းဓာတ်အားများဖြင့် နိုင်ငံတော် ဓာတ်အားစနစ်မှတစ်ဆင့် လိုအပ်သောနေရာများသို့ ဖြန့်ဝေပေးသွား မည်ဖြစ်သည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ကျောက်ဆည်မြို့ ညောင်ပင်သောက်ကျေးရွာရှိ အနော်ရထာမင်းကြီး တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သော သမိုင်းဝင်တမုတ် ရှင်ပင်ရွှေဂူဘုရားသို့ ရောက်ရှိပြီး ပန်း၊ ရေချမ်း၊ ဆီမီး ကပ်လှူပူဇော်ကာ အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်းသည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ကျောက်ဆည်မြို့မှ ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် ထွက်ခွာခဲ့ပြီး မြို့ကြီးရေလှောင်တမံသို့ ရောက်ရှိရာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သူနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုကြသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့သည် စက်လှေဖြင့် တမံအတွင်း ရေသို လှောင်ထားရှိမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို လိုက်လံကြည့်ရှုသည်။ ထိုသို့လိုက်လံကြည့်ရှုစဉ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်မြင့်လှိုင်တို့က မြို့ကြီးရေလှောင်တမံဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ စိုက်ပျိုးရေဖြန့်ဝေ ပေးနေမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်သည် မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် တမံပတ်လမ်းအတိုင်း တမံတည်ဆောက်ထားမှု အခြေအနေနှင့် ရေယူအဆောက်အအုံအား လိုက်လံကြည့်ရှုရာ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူ များက စိုက်ပျိုးရေပေးဝေနေမှု၊ ရေသိုလှောင်ထားရှိမှုနှင့် တမံအခြေအနေတို့ကို ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်သည် မြို့ကြီးရေအားလျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအား ကြည့်ရှုသည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့သည် ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် ရွာငံ(ပင်းတယ)၊ တီကျစ်၊ ပင်လောင်း၊ ပေါင်းလောင်းဒေသများ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ရာ ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိကြသည်။
Read 366 times Last modified on Saturday, 18 May 2019 07:59
More in this category: « AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသူ ကျေးရွာတာဝန်ခံ တစ်ဦးအား တရားဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ နှင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) မိသားစုများ ကဆုန်ညောင်ရေသွန်း လောင်း ပူဇော် »